TravelComments.com – Zimbabwe: Fastjet (Zimbabwe) has adjusted plans to resume operations again! – ATC News by Prof. Dr. Wolfgang H. Thome
TravelComments.com – Zimbabwe: Fastjet (Zimbabwe) has adjusted plans to resume operations again!
Low-cost carrier Fastjet (Zimbabwe) has adjusted plans to resume operations again. According to the latest announcement by the airline, all flights across the scheduled network will be suspended up to and including 30 September 2020. This decision was made in consideration of the continued flight restrictions in Zimbabwe and South Africa. Fastjet’s flexible booking change policy with no fees or fare differences applicable has been extended until 15 March 2021. The airline’s call centre, shops, airport ticket sales and trade support services will remain closed will remain closed until further notice.
Next TravelComments.com – South African National Parks (SANParks): Accommodation booking rules for lockdown level two!